एसिय प्यासिफिकमा अधुरा योजना पुरा गर्न मेराे उम्मेदवारी: किरण विक्रम थापा |
एसिय प्यासिफिकमा अधुरा योजना पुरा गर्न मेराे उम्मेदवारी: किरण विक्रम थापा
एनआरएनए आठौँ विश्व सम्मेलन २०१७ विशेष
10 October, 2017 | Sandeep Bhattarai | 4145 Views | comments
गैरआवासीय नेपाली अभियानमा किरण विक्रम थापाको नाम क्रियाशिल र सक्षम नेतृत्वकर्ताका रुपमा चिनिन्छ। एनआरएनए जापान कार्यसमिति सदस्य २००५-२००७, एनआरएनए आईसीसी सदस्य दुई कार्यकाल २००७-२०११, एनआरएनए आईसीसी एसिया प्यासिफिक उपसंयोजक एक कार्यकाल २०११-२०१३ र एनआरएनए आईसीसी एसिया प्यासिफिक संयोजक एक कार्यकाल २०१५-२०१७ रहेर काम गरिसक्नु भएका थापाले यसैसाता काठमाडौँमा सुरु हुन गईरहेको आठौँ गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए विश्व सम्मेलन पश्चात चयन हुने नेतृत्वमा पुन: एसिया प्यासिफिक संयोजक पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ।
विश्व सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा थापाकाे उम्मेदवारी तथा अधिवेशन विषयमा नेपाल जापान डटकमका लागि आनन्द कोइरालाले गर्नुभएको समसामायिक कुराकानी संक्षेपमा
एनआरएनए आईसीसी एसिया प्यासिफिक संयोजक पदमा पुन उम्मेदवारी किन?
एनआरएनए विधान अनुसार दुई कार्यकाल बस्न पाउने वैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै पुरा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका तमाम समस्या र अवसरलाई नेपालीहरु माझ प्रष्ट केही काम बाँकी रहेकाले मैले फेरी यही पदमा बसेर काम पुरा गर्ने योजना बनाएको छु। मैले मात्र गरेर सक्ने होईन कि यतिवेला मेरो नेतृत्वमा थालनी भएका केही महत्वपूर्ण विषयलाई राम्रोसंग उठान गरेर आगामी वर्ष नयाँ पिढीलाई हस्तान्तरण गर्ने छु।
दुई वर्षमा केही उपलब्धि मुलुक काम चै के के गर्नुभयो?
पहिलो वर्ष नेपाल जापानको ६० औँ सम्वन्धको वर्षगाठ अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरयौ, ईण्डोनेसियाको वालीमा लगानीकर्ताहरुका लागि विशेष सम्मेलन गरयौ। मलेसियामा एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको आयोजना गरि विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा वृहत छलफल गर्यौ। नेपालमा जानेगरेको दैविप्रकोप अवस्थामा यसका रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्यौ। र पहिलो पटक युवाहरुलाई सकृय गराउने उदेश्यले फुटवल प्रतियोगिताको शुरुवात गरियो। युवाहरुलार्इ जागरुक र सक्षम अनि नेृतत्वमा ल्याउन हामी सहयाेग र हातेमालाे गर्छाै।
यी त देखाउने मात्र काम भए तर उपलब्धि मुलक काम त केही भएको जस्तो लागेन ?
केही कामहरु देखिदैन तर हामीले गरिरहेको कार्यक्रमले नयाँ पिढीहरुलाई केही न केही उत्प्रेरण जनाउने किसिमका कामहरुको सुरुवात गर्ने प्रण गरेका छौ। दुई वर्षमा भएका केही कामहरु धेरै नै उपयोगी र अवसरका लागि महत्वपूर्ण भएको हामी दावी गर्न सक्छौ। विभिन्न रोजगारीसंग सम्वन्धित काम गर्यौ
नेपालमा सीप, लगानी र पूँजी भित्राउने योजना अनुरुप
एक साझा र स्वतन्त्र संगठनको परिकल्पना अनुरुप यहाँ समाहित भएका छौ।
यस पटक पनि किरण विक्रम थापालाई एसिया प्यासिफिक संयोजकमा किन जिताउने ?
एक कार्यकाल सकेपनि मेरा केही सोच विचारलाई कार्यान्वयन गर्न थप समय आवश्यक भएकाले मेरो उम्मेदवारी दोहोर्याउन खोजेको हुँ। केही साथीहरुले तपाईले केही नयाँ कामलाई टुङगोमा पुर्याएरमात्र अगाडी जानुस भनेर भनेकाले मैले सोही पदमा दोहोर्याउन लागेको हुँ। केही चुनौतीहरु छन जुन एनआरएनए अभियानसंग पनि सम्वन्धित भएका विषयलाई सवैको साझा संस्था बनाउन पनि मैले केही देखिने काम गर्नु पर्नेछ। भाषण र नगरेको कामलाई मैले गरे भनेर भन्दिन तर गरि सकेर भन्ने मान्छे भएकाले मलाई सोही पदमा बसेर काम गर्ने ईच्छा छ।
उपसंयोजक र एसिया प्यासिफिक संयोजक भएर दुई कार्यकालमा काम के चै गर्नुभयो त ?
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका तमाम नेपालीहरुको समस्याहरु विभिन्न अवसर र नेपालमा लगानी भित्राउन हामी आफैले जागरुक भएर एक आपसमा हातेमालो गरेर सहि र गलत कामलाई निक्र्यौल गर्नुपर्ने भएकाले आगामी दिनमा मैले यसलाई सार्थक देखिने गरि केही काम गर्न चाहन्छु। वितेका चार वर्ष मैले यहाँका खास समस्या तथा समाधान र अन्य गैरआवासीय नेपाली संघ मातहतमा बसेर केके गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन छलफल तथा नेपाल राष्ट्र बैक, परराष्ट्र मन्त्रालय श्रम तथा अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरकारी मन्त्रालयहरुस‌ग समन्वय गरेर काम सुरु गरेका छाै।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा लाखौ नेपाली श्रमिक दाजुभाईहरुलाई शोषण गर्नेहरु एनआरएनएका नेता तथा अभियन्ता बनेर बसेको आरोप छ यस वारेमा के भन्नुहुन्छ ?
यो आरोपका वारेमा हामीले केही जानकारी पाएका छाै तर कुनै ठाेस प्रमाण विना कसैलार्इ अाराेप लगाएकाे भरमा हामीले केही गर्न सक्दैनाै। म स्वयमले नेपाली दाजुभाईहरुमा कुनैपनि विदेशमा श्रमका लागि जानुभन्दा अघि यसका कानुनी विषयमा कामको वारेमा अनि सरकारी निकायले बनाएको र भन्दै आएको विषयमा गंभिर अध्ययन गरेर आवेदन दिन अनुरोध गर्दछु। यस वारेमा जो जहाँबाट पनि कानुनी उपचार लिन सक्नुहुन्छ यसमा हामीले लिखित उजुरी पाएकाे खण्डमा सरकारी निकायस‌ंग समन्वय गर्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म एनआरएनए अभियानमा गलत मान्छेहरुको समुह हावी भएको जस्तो देख्नुभएको छ भने पनि हामीलाई जानकारी दिन सक्नु हुन्छ।
अहिलेसम्म कोही कसैलाई कारवाही भएको अनि कानुनी दायरामा पुरर्याएको जानकारी छ ?
अहिलेसम्म केही प्रमाण पुरर्याएर आएका दर्जन वढी विषयमा पीडितले न्याय पाएको र कानुनी कारवाहीको दायरामा पुरर्याएका छौ। र यदि प्रमाणका साथ कोही पनि हामीकहाँ, कुनैपनि दूतावासमा र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिनु हुन्छ भने यस्ता विषयमा तपाई हरेकलाई मद्धत गर्न तयार छौ। कानुनी सहायता, प्रकृया र समुहमा काम गर्न सवैलाई साथ दिन्छौ।
शोषण भयो, म यहाँ मर्कामा परे अनि यहाँ यसरी समस्यामा परे भनेर
भन्दा हामीले चुप लागेर बस्नु हुदैन।
पीडितलाई न्याय दिलाउन हामी जहिल्यै तयार छौ।
यस विषयमा कोही कसैले जुन मुलुकमा वसेको हो त्यही देशमा कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। एनअारएनए स‌ंस्था भनेकाे सवैकाे साझा स‍ंस्था हाे हामी कुनै कानुनी उपचार गर्नेसंस्था हाेर्इन तर कसैलार्इ सल्लाह चाहिएमा हामीले सहयाेग गर्छाै।
नेपालीहरुका विभिन्न समस्याका विषयमा समस्या समाधानार्थ र अवसरको खोजीका विषयमा नेपालका कुनै सरकारी निकायसंग सहकार्य गर्नुभएको छ ?
छ, हामीले एनआरएनएमा आवद्ध हुनुपर्ने करिव ६० लाख नेपालीहरुका विभिन्न समस्या समाधानार्थ पहल गर्नेछौ र विभिन्न निकायमा कुनै गुनासो भए हामीलाई सिधै जानकारी दिएको खण्डमा खासगरि परराष्ट्र मन्त्रालय सहित श्रम, अर्थ लगायतका सवै मन्त्रालयहरुसंग सहकार्य गरेर समाधान गर्ने गरेका छाै। यस स‌गै हामीले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका हरेक दूतावास कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने गरेका छौ।
समस्याको समाधान नै हुदैन त अनि किन तपाईहरुलाई उजुरी गर्ने ?
हाेईन कसैले मलाई यहाँ शोषण भयो, म यहाँ मर्कामा परे अनि यहाँ यसरी समस्यामा परे भनेर भन्दा हामीले चुप लागेर बस्नु हुदैन। पीडितलाई न्याय दिलाउन हामी जहिल्यै तयार छौ। यदि कसैले त्यस्तो नराम्रो काम गरेको खण्डमा पीडकलाई कानुनी दायरामा पुर्याउन सहज रुपमा सहिन्छ। प्रमाण भए हामीले गलत काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा पुर्याउछौ।
करिव डेढ दशकको एनआरएनए अभियानमा हालसम्जम्मा ६० हजार मात्र सदस्यता बनाउनु भएको रहेछ, सवैको साझा संस्था चै कहिले बन्ला ?
नेपाललाई समृद्धि बनाउन हरेक नेपालीको उत्तिकै दायित्व भित्र पर्छ। हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरुले संगठित भएर नेपालमा सीप, लगानी र पूँजी भित्राउने योजना अनुरुप एक साझा र स्वतन्त्र संगठनको परिकल्पना अनुरुप यहाँ समाहित भएका छौ। सदस्यता कम बेसी भन्ने भन्दा पनि कतिजनालाई नेपाललाई समृद्ध बनाउन मन लागेको छ।
एनअारएनएले हरेक नेपालीलार्इ उसकाे काम र श्रमकाे सम्मान गर्दै उसलार्इ नेतृत्व गर्न प्रेरित गर्छाै । एनअारएनएमा हाल जतिलाई समुहमा वसेर काम गर्ने रुची राख्नुहुन्छ त्यस्ता सवै यहाँ अटाउनु भएको छ। यसरी भन्दा अरुले केही गर्नुभएको छैन भन्ने हाेर्इन तर समुहिक रुपमा मिलेर काम गर्नेहरु यहाँ आवद्ध भएर गर्छु भन्नेका लगि एनआरएनए साझा संस्था हो।
अाफुले सवैलार्इ मिलाएर र समेटेर जानुपर्छ भन्नु हुन्छ भने तपार्इ अाफैपनि साझा स‌ंस्थाहाे भन्नु हुन्छ नी।
यति भनिरहदा तपार्इलार्इ पदको लोभी भनेर आरोप लगायो भने के भन्नुहुन्छ, काम गर्नलाई त पद नै किन चाहियो र ?
मैले अघि नै भने मलाई समृद्ध नेपाल बनाउन हरेक युवालार्इ नेतृत्वमा पुर्याउनका लागि हामी सवैकाे साझासंस्थामा रहेर काम गर्ने ईच्छा देखाउनु पर्याे।
मैले जानेको र सकेको हरेक काम प्रभावकारी बनाउन सक्ने भएकाले केही अपुरा काम पुरा गर्न अहिलेलाई पुन: एक पटक एसिया प्यासिफिक संयोजक पदमै बसेर काम गर्ने याेजना छ। जुन विषय सुन्दा फरक लागेपनि आफनो जिम्मेवारी पुरा गर्न मलाई जहाँ वसेपनि ठिक छ। कतिपय साथीहरुले मलाई नै आउनु पर्यो भनेर भनेका कारण म आउन लागेकाे छु। यसलाई कसैले लोभी पापी भन्दा पनि म तमाम युवा जमातको सहयोगीका रुपमा बस्न खोजेको हुाँ। यदि कोही म कोही गर्न सक्छु भनेर आउनु हुन्छ भने म वाधक हुन्न।
एनआरएनएमा नयाँ पदाधिकारीहरु चयन प्रकृयामा सर्वसम्मत रुपमा छनौट हुन सक्दैन ?
नसक्ने र नहुने भन्ने केही पनि छैन। तर आँकाक्षा बोकेका साथीहरुले मिलेर जाऔ नभनेकाले आफनो प्रचार आफै गर्दै हिडेकाले परिस्थित फरक देखिएको हो। भरसक यस पटक सवैले नयाँ नेतृत्वलाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गर्ने पहल गर्ने छौ।
एसिया प्यासिफिक संयोजक पदमा तीन जनाको नाम आएको छ हामीहरु बीच समन्वय भएर अगाडी बढन पहल गरेर काम गर्ने छौ।
यस पटकको नयाँ नेतृत्व कस्तो आउनु पर्छ भन्नु हुन्छ ?
एनआरएनए अभियानलाई नजिकबाट नियाल्ने र तल्लो तह देखि माथिल्लो तहसम्मका विषयमा जानकार भएको साझा व्यक्ति नै नेतृत्वमा आउनु पर्छ। अनि खर्चको हिसावले धेरै तडकभडक नगरी भरसक सर्वसम्मत ढंगले नेतृत्व चुनिनु लाभदायक देख्छु म।
अन्त्यमा आसन्न एनएआरएनए विश्व सम्मेलन वारे केही भन्न मनलागेको भए?
एनआरएनए विश्व सम्मेलन गैरआवासीय नेपालीहरुको महाकुम्भ भएकाले वृहत छलफल र विचार विमर्सगरेर नेपाललाई समृद्ध बनाउन साझा अवधारण बनाउन सवैमा अपील गर्न चाहन्छु।
#किरण विक्रम थापा